လူမျိုးစုအားဖြင့် ထိုင်းတရုတ်အနွယ်ဝင်ဖြစ်ပြီး ကရင်လူမျိုးစုတွင်ပါဝင်သည်။ အင်္ဂလိပ်လက်ထက်မှစပြီး ကရင်နီဟုခေါ်ခဲ့သည်။ မင်းတုန်းမင်းသည် အနောက်ကရင်နီနယ်ကို သိမ်းပိုက်ရန်ကြိုးစားသဖြင့် ဗြိတိသျှတို့က ကန့်ကွက်သည်။ သို့ဖြင့် မင်းတုန်းမင်းနှင့် အောက်မြန်မာပြည် ဝန်ရှင်တော်မင်းကြီး ဖယ်ရာတို့၏ သဘောတူစာချုပ်အရ ကရင်နီနယ်ကို သီးခြားလွတ်လပ်သောနယ်မြေအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုသည်။ ကရင်နီနယ်သည် အင်္ဂလိပ်ကိုလိုနီခေတ်တွင် လွတ်လပ်သော ကြားနယ်မြေ ဖြစ်ခဲ့သည်။ သို့ရာတွင် ဗြိတိသျှတို့သည် ကရင်နီနယ်တွင် ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မြဲ စွက်ဖက်ခဲ့သည်။ ဗြိတိသျှတို့သည် ကရင်မျိုးနွယ်စုများအား ဝတ်သည့် အင်္ကျီကိုကြည့်ပြီး ကရင်ဖြူ၊ ကရင်နီ၊ ကရင်နက်၊ ကရင်ကြားဟု သတ်မှတ်ခေါ်ဆိုသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ Archived 13 January 2012 at the Wayback Machine.
ကရင်နီတို့က ဒါဟာ မြန်မာအစိုးရက တစ်ချိန်က ကရင်နီပြည်နယ်ရဲ့ လွတ်လပ်မှုကို ပြည်ဖုံးကားချချင်လို့ ကယားဆိုပြီး အမည်ပြောင်းဖြစ်တယ်ဟူ၍ သူတို့၏ သမိုင်းတွင် ရေးသားဖော်ပြထားသည်။ ထို့ကြောင့် သူတို့သည် ကယားဆိုသည်ကို မကြိုက်။ ကရင်နီဟု ခေါ်သည်ကိုသာ ကြိုက်နှစ်သက်သည်။ Archived 13 January 2012 at the Wayback Machine.
ကယားနှင့် ကရင်နီ အခေါ်အဝေါ်
ခွန်းဆက်နေ (၇ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၆)။ ဒွေးမယ်နော်တို့ပျော်စံရာ ကယားမြေ။ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန။ ၁၉ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၈ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Karenni(Kayah) and Kayan Studies: ကကရင္နီ (ကယား) စုံတြဲ